သစ်ပင်နေ ဆလော့ (Sloth) တို့၏ ထူးခြားသည့် အချက်များ | Curiosity Science Magazine
August 9, 2016 · by Kyaw Zwar Lynn	· in Life Science.	·
ဆလော့ (Sloth) ဟူသည် မီဂါလိုနီခစ်ဒေး (Megalonychidae) နှင့် ဘရက်ဒီပေါ့ဒစ်ဒေး (Bradypodidae) မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ခြောက်ခု တွင် ပါဝင်သော နှေးကွေးစွာ ရွေ့လျားသည့် တိရစ္ဆာန်များကို ရည်ညွှန်းသည်။ သူတို့၏ နှေးကွေးလေးလံသည့် အမူအရာမှ တပါး သူတို့အကြောင်း သင်ဘယ်လောက် သိထားပါသလဲ။ ဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။
(၁) ဆလော့များတွင် အလွန်နှေးကွေးသည့် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ရှိသည်
ဤအချက်သည် လူသိအများဆုံး ဆလော့အကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်း၏ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် မည်မျှ နှေးကွေးသည်ကိုမူ ဖော်ပြသင့်ပါသည်။ နှိုင်းယှဉ်မည်ဆိုပါက ပျှမ်းမျှလူသားတစ်ဦးသည် အစာစား၊ အစာချေဖျက်၍ အညစ်အကြေးစွန့်သည်အထိ အချိန် ၁၂နာရီမှ ၄၈နာရီအထိ ကြာနိုင်သည်။ ဆလော့အတွက် အရွက်တစ်ရွက်ကို ချေဖျက်ရန် တစ်လ အချိန်ယူရသည်။ ၎င်းတို့သည် လုံခြုံသည့်သစ်ပင်ပေါ်မှ အညစ်အကြေးစွန့်ရန် အချိန်မှလွဲ၍ ဆင်းသက်ခဲသည်။ ကံကောင်းသည်မှာ ၎င်းတို့သည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဝမ်းကိုထိန်းထားနိုင်ပြီး တစ်ပတ်တွင် တစ်ကြိမ်သာ သစ်ပင်ပေါ်မှဆင်း၍ အညစ်အကြေးစွန့်လေ့့ရှိသည်။ တစ်ကြိမ် အပေါ့အလေးသွားပြီးလျှင်လည်း ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ သုံးပုံတစ်ပုံမျှ လျော့သွားနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်း၏ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် ထက်ဝက်ရှိသည့် အညစ်အကြေးများကို ထိန်းထားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၂) ဆလော့သားမွေးတွင် မှိုနှင့် ရေညှိ ပါဝင်သည်
ဆလော့သည် တစ်မိနစ်အတွင်း သုံးမီတာ မျှသာ ရွေ့လျားနိုင်သဖြင့် အလွန် နှေးကွေးသည့် တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများ သူတို့ကို မမြင်အောင် နေခြင်းသည်သာ သားရဲအန္တရာယ် (လင်းယုန်၊ ကျားသစ်၊ မြွေ၊ နှင့် မုဆိုး) များမှ အဓိက ခုခံရှောင်လွှဲသည့်နည်း ဖြစ်သည်။ ဆလော့တွင် သားမွေးနှစ်ထပ်ရှိသည်။ အတွင်းဖက်သားမွေးသည် တိုပြီး နုညံ့သည်။ အပူဒဏ်ထိန်းသိမ်းပေးပြီး နွေးထွေးစေသည်။ အပြင်ဖက်သားမွေးသည် ကြမ်းတမ်းပြီး အက်ကွဲကြောင်းများပါသည်။ ၎င်းအက်ကွဲကြောင်းများ၌ ရေညှိနှင့် မှိုများ ပေါက်သည်။ ညစ်ထေးပြီး ရေညှိစိမ်းများ ဖုံးနေသည့် ဆလော့သည် သစ်ပင်ပေါ်၌ ကောင်းစွာ ကိုယ်ဖျောက်ပေးထားနိုင်သည်။
(၃) သားမွေးသည် အင်းဆက်ဂေဟာတစ်ခု
မွှားနှင့် ကမြင်းကောင်တို့ပါဝင်မည့် သွေးစုပ်အင်းဆက်များကို ဆလော့သားမွေးတွင် ထုံးစံအတိုင်း တွေ့ရနိုင်သည်။ မစင်စားသည့် အင်းဆက်များကိုလည်း ဆလော့တွင် တွေ့ရနိုင်သည်။ ဆလော့သားမွေးထဲတွင် ပိုးတောင်မာ၊ ကမြင်းကောင်နှင့် ဖလံကောင် မျိုးစိတ် စုစုပေါင်း ကိုးခုအထိတွေ့နိုင်သည်။ ဆလော့တစ်ကောင်ဆိုလျှင် ၎င်း၏သားမွေးထဲ၌ ပိုးတောင်မာ အကောင်ရေ ၉၈ဝမျှပင် တွေ့ရသည်။
ဆလော့ဖလံကောင် မျိုးစိတ်ငါးခုသည် ဆလော့အိမ်ရှင်တစ်ကောင် ရှာလျက် ၎င်းအပေါ်တွင် နေထိုင်လေ့ရှိသည်။ သစ်ပင်ပေါ်မှဆင်း၍ အညစ်အကြေး စွန့်သည့်အခါ ဖလံသည် မစင်ထဲတွင် ဥဥချခဲ့သည်။ ပိုးမမည် (Larva) သည် မစင်ခြောက်ထဲတွင် သက်ကြီးကောင်အဖြစ် ကြီးထွားပြီး အိမ်ရှင်ဆလော့ တစ်ကောင် ရှာကြမည်ဖြစ်သည်။ ဖလံတို့သည် ဆလော့သားမွေးထဲတွင် သေဆုံးသော် မှိုနှင့် ရေညှိအတွက် မြေသြဇာဖြစ်စေခြင်းဖြင့် ဆလော့အတွက် အကျိုးရှိစေသည်။
(၄) တောထဲမှ ဆလော့များသည် ကျွန်ုပ်တို့ ထင်သကဲ့လောက် မအိပ်
ဖမ်းထားသည့် ဆလော့များကို လေ့လာပြီးနောက် သုတေသီတို့က ဆလော့သည် တစ်နေ့လျှင် ၁၅-၁၈ နာရီအထိ အိပ်သည်ဟု သိရှိထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဆလော့သည် အလွန် အအိပ်ကြီးသည်ဟု လူသိများပါသည်။ သို့သော် ၂ဝဝဂခုနှစ် လေ့လာချက်တစ်ခု၌ ဆလော့အရိုင်းများတွင် ဦးနှောက်လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု တိုင်းသည့် ကိရိယာ (Electrocephalogram – EEG) တပ်ပြီး လေ့လာကြည့်သော် တစ်နေ့လျှင် ၉-၁ဝ နာရီမျှသာ အိပ်ကြောင်း သိရသဖြင့် ပျှမ်းမျှလူသားတစ်ဦးနှင့် များစွာ မကွာခြားလှပေ။ ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဆလော့တွင် သားရဲအန္တရာယ်မရှိခြင်းသည် ၎င်းတို့ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်နိုင်သည့် အကြောင်းရင်း ဖြစ်နိုင်ကောင်းသည်။ အစားအသောက်နှင့် အခြားအကြောင်းရင်းများလည်း ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါသည်။
(၅) ဆလော့ သည် အတိတ်ကထက် များစွာ ပြောင်းလဲသွားသည်
ကျွန်ုပ်တို့ ယနေ့ သိရသည့် ဆလော့ မျိုးစိတ် ခြောက်ခုသည် သစ်ပင်နေ တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ပြီး ဆင်တီမီတာ ၅ဝ-၆ဝ မှသာ ကြီးထွားနိုင်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်သန်းပေါင်းများစွာက နေထိုင်ခဲ့သည့် ဆလော့များသည် မြေပြင်နေ တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ပြီး မီဂါသီရီယမ် (Megatherium) ကဲ့သို့ ရှေးဦးမျိုးစိတ်များသည် ခြောက်ပေအထိ ရှည်ပြီး ငါးတန် အလေးချိန်ရှိသဖြင့် အာဖရိကန်ဆင် အရွယ်အထိ ရှိပါသည်။ ထို ဧရာမ ဆလော့ကောင်ကြီးများသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၃၅သန်းခန့်တွင် စတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီး လွန်ခဲ့သည့် နှစ်တစ်သောင်းခန့်၌ လူသားများ တောင်အမေရိကသို့ ပျံ့နှံ့လာသောအခါ မျိုးပြုန်းသွားခဲ့သည်။
(၆) ခြေချောင်း နှစ်ချောင်း ဆလော့များ၌ ခြေချောင်း သုံးချောင်းရှိသည်
မီဂါလိုနီခစ်ဒေး (Megalonychidae) မျိုးရင်းသည် ခြေချောင်းနှစ်ချောင်း ဆလော့မျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီး ဘရက်ဒီပေါ့ဒစ်ဒေး (Bradypodidae) မျိုးရင်းသည် ခြေချောင်းသုံးချောင်း ဆလော့မျိုးနွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ခြေနှစ်ချောင်း ဆလော့များသည် အမှန်စင်စစ်ကား ရှေ့ခြေ (လက်) ၌ ခြေချောင်း နှစ်ချောင်း ရှိသော်လည်း နောက်ခြေ (ခြေထောက်)တွင်မူ ခြေချောင်းသုံးချောင်း ရှိပေသည်။ စပိန်နာမည်မှ အင်္ဂလိပ်နာမည် ဘာသာပြန်စဉ်၌ နားလည်လွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ စပိန်ဘာသာ၌ ‘Dedo’ သည် ခြေချောင်းနှင့် လက်ချောင်း နှစ်ခုလုံးကို ညွှန်းဆို၍ဖြစ်သည်။
(၇) ဆလော့သည် အံ့သြဖွယ်ရာ ရေကူးကျင်လည်သည်
အညစ်အကြေးစွန့်ဖို့အပြင် ရေကူးရန်အတွက်လည်း သစ်ပင်ပေါ်မှ ဆင်းတတ်သည်။ မိုးရာသီ၌ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆလော့တို့သည် ရေထဲသို့ ခုန်ချလျက် အခြားသစ်ပင်ဆီသို့ ရေကူးသွားနိုင်သည်။ ရေကူးပုံသည် ခွေးကူးနှင့် ဖားကူး ပုံစံနှစ်မျိုး ပေါင်းစပ်ထားသည် နှင့်တူ၏။ စင်စစ် ဆလော့သည် မြေပြင်တွင် လမ်းလျှောက်သည်ထက် ရေကူးသွားလျှင် သုံးဆ ပိုမြန်သည်။ ၎င်း၏ နှေးကွေးသည့် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်သည် ရေကူးရာ၌ သာလွန်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်နှလုံးခုန်နှုန်း၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ထက်နည်းအောင် ထိန်းထားနိုင်၍ ရေအောက်၌ မိနစ် ၄ဝမျှ အသက်အောင့်ထားနိုင်ပါသည်။
(၈) ထူးခြားသည့် ခန္ဓာတည်ဆောက်ပုံကြောင့် တွဲလွဲဆွဲနိုင်သည်
သစ်ပင်ပေါ် နေစဉ်၌ ဆလေ့ာ့သည် သစ်ကိုင်းတွင် တွဲလွဲဆွဲနေလေ့ရှိသည်။ ဤအနေအထားဖြင့် အစားစားသည်။ မိတ်လိုက်သည်။ ကလေးမွေးပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ဝမ်းတွင်းကလီစာများနှင့် စုသိမ်းထားသည့် အညစ်အကြေးများသည် ရင်ခေါင်းကန့် ကြွက်သား (Diaphragm) ကို အပေါ်မှ ဖိထားနိုင်သည်။ ရင်ခေါင်းကန့် ကြွက်သားသည် အဆုတ် ရှုံ့ကားရန်အတွက် အထက်အောက် လှုပ်ရှားပေးရသည်။ ဤသို့ဖိထားသဖြင့် အသက်ရှုရာတွင် အတားအဆီး ဖြစ်မည်လောဟု မေးရန်ရှိလာသည်။ ဝမ်းတွင်းအင်္ဂါများသည် ဝမ်းဗိုက်တွင် ချိတ်ဆွဲထားကြောင်း သုတေသီတို့က တွေ့ရှိထားသည်။ ထို့ကြောင့် စင်စစ်တွင် အသက်ရှုရာ၌ အတားအဆီး မဖြစ်ပါ။ ဤခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံသာ မရှိလျှင် အသက်ရှုရန် အင်အားပိုသုံးရပြီး ထိုအင်အားကို ၎င်း၏ ဇီဝကမ္မစနစ်ကလည်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
(၉) ဆလော့၏ မိဘမေတ္တာသည် အခြွင်းအချန်မရှိ မဟုတ်ပါ
တိရစ္ဆာန်မျိုးနွယ်များစွာ၌ မိဘတို့သည် များစွာအားထုတ်၍ ၎င်း၏ သားသမီးများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးတတ်ကြသည်။ ဆလော့မိခင်များသည် ကလေးကို အမှန်တကယ် စောင့်ရှောက်ပါသည်။ သို့သော် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိဖြစ်သည်။ မွေးပြီး ပထမ ၃လမှ ၈လသား ဆလော့ပေါက်စများသည် နို့ပြတ်ပြီးချိန်၌ပင် မိခင်ပေါ်တွင် တွယ်တက်နေထိုင်ကြသည်။ ဤသို့ နေထိုင်နေစဉ် မိခင်သည် သားရဲများကို ၎င်း၏ လက်သည်းရှည်များဖြင့် ခြောက်လှန့်လျက် သားသမီးကို စောင့်ရှောက်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ၌ ကလေးငယ်သည် မိခင်ကိုယ်မှ ချော်၍ မြေပြင်သို့ ကျသွားနိုင်သည်။ ဆလော့သည် သဘာဝအလျောက် ကြံခိုင်သည့် တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ပြီး အပင်မှ ပြုတ်ကျရုံဖြင့် သေဆုံးလေ့မရှိပေ။ မိခင်သည် ပြုတ်ကျသွားပြီး ငိုနေသည့် ကလေးကို လာမကောက်ယူခြင်းသည်သာ အန္တရာယ်အစစ် ဖြစ်သည်။ တကယ့် လက်တွေ့၌ ကလေးကို သားရဲတိရစ္ဆာန် မလာခင် ပြန်ကောက်ယူရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ သို့ဖြစ်၍ မိခင်အနေဖြင့် မည်သို့မျှ မတတ်နိုင်ပေ။ ထို့အပြင် မိခင်ကိုယ်မှ ချော်ကျခြင်း ကိုယ်တိုင်ကပင် ဆလော့ပေါက်စ၏ ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်နိုင်ကောင်းသည်။
အချို့ စွန့်ပစ်ခံ ဆလော့ပေါက်စများကို လင်းယုန်နှင့် ကျားသစ်က မရှာတွေ့မီ ကြင်နာသနားတတ်သည့် လူများက ကံကောင်းစွာ ရှာတွေ့သွားလျှင် ၎င်းတို့ကို လုံခြုံရာအရပ်၌ ထိန်းသိမ်းပေးထားပြီး အရွယ်ကြီးလာမှ တောထဲသို့ ပြန်လွှတ်ပေးလေ့ရှိသည်။ အော်ငိုနေသည့် ကလေးကို သေသည်အထိ ပစ်ထားသည့် မိခင်အကြောင်း တွေးမိလျှင် စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာဖြစ်သော်လည်း ဆလော့ပေါက်စလေးများ၏ အသံသည် အင်မတန် ချစ်စရာကောင်းပါသည်။
(၁ဝ) နို့တိုက်သတ္တဝါ၏ လည်ပင်းကျောရိုးဆစ် ဥပဒေသသည် ဆလော့အတွက် ခြွင်းချက်
နို့တိုက်သတ္တဝါအားလုံး၏ ဘိုးဘေး တိရစ္ဆာန်သည် လည်ပင်းကျောရိုးဆစ် ခုနစ်ခုသာ ပါသည့်အလျောက် နို့တိုက်သတ္တဝါ အားလုံးနီးပါးသည် လည်ပင်းကျောရိုးဆစ် ခုနစ်ခု ရှိကြသည်။ အကြီးဆုံး နို့တိုက်သတ္တဝါ ဝေလငါးပြာ၊ လည်ပင်းရှည်လှသည့် သစ်ကုလားအုတ်၊ အသေးဆုံး နို့တိုက်သတ္တဝါ ကစ်တီ ဝက်နှုတ်သီး လင်းနို့ (Kitti’s Hog-Nosed Bat) အားလုံးတွင် လည်ပင်းကျောရိုးဆစ် ခုနစ်ခု ရှိကြသည်။ မင်နာတီး ရေဝက်များ၌ လည်ပင်းကျောရိုးဆစ် ခြောက်ခုရှိသည်။ သို့သော် ခြေချောင်းနှစ်ချောင်း ဆလော့များ၌မူ လည်ပင်းကျောရိုးဆစ် ငါးခုသာ ရှိပြီး လည်ပင်းကျောရိုးဆစ် အနည်းဆုံး နို့တိုက်သတ္တဝါ ဖြစ်ပါသည်။ ခြေချောင်းသုံးချောင်း ဆလော့တွင် လည်ပင်းကျောရိုးဆစ် ရှစ်ခုမှ ကိုးခုအထိ ရှိနိုင်ပါသည်။
ဤပုံမှန်မဟုတ်သည့် လည်ပင်းကျောရိုးဆစ် အရေအတွက် မည်သို့ ပေါ်ပေါက်လာကြောင်း ကောင်းစွာ မရှင်းလင်းသေးပဲ ဇီဝဗေဒပညာရှင်များ ကြား၌ ဆွေးနွေး အငြင်းပွားဆဲရှိသည်။ အခြားတိရစ္ဆာန်များအတွက်မူ လည်ပင်းကျောရိုးဆစ် အရေအတွက် မူမမှန်ဖြစ်ပါက ကလေးသည် အသေမွေးသော်လည်းကောင်း၊ မွေးပြီး ကြာကြာ အသက်မရှင်နိုင်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။လည်ပင်းကျောရိုးဆစ် ချို့ယွင်းမှုကြောင့် လည်ပင်း အာရုံကြောနှင့် သွေးကြော ရောဂါများသော်လည်းကောင်း၊ ကင်ဆာသော်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆလော့၏ နှေးကွေးသည့် ဇီဝကမ္မစနစ်သည် ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပြီး အသက်ရှုနှေးသည့်အတွက် လည်ပင်းအာရုံကြော ထိခိုက်မှုလည်း မဖြစ်နိုင်ပေ။ ခြေချောင်းသုံးချောင်း ဆလော့များ၌မူ လည်ပင်းကျောရိုးဆစ် အပိုရှိသောကြောင့် ဦးခေါင်းကို ၂၇ဝ ဒီဂရီ အထိ အံ့သြဖွယ်ရာ လှည့်နိုင်ပါသည်။
~ Kyaw Zwar Lynn
Previously published in Curiosity Science Magazine Issue5November,2014. pp 8- 10.
Source: “Happy Sloth Week – Here’s Ten Facts About Sloths” IFLS. Retrieved on June 21, 2014 fromhttp://www.iflscience.com/plants-and-animals/happy-sloth-week-heres-ten-facts-about-sloths
← မွိန္ျပျပအျပာေရာင္ အစက္ကေလး
ကမာၻေပၚက အားအျပင္းဆံုးဗံုး သို ့မဟုတ္ Tzar bomba →
2 responses to “သစ်ပင်နေ ဆလော့ (Sloth) တို့၏ ထူးခြားသည့် အချက်များ”
alexanderhtun August 31, 2016 at 3:18 pm · · Reply →
Moesatnga August 20, 2016 at 10:18 pm · · Reply →